Nhau - 2020 Gunyana Wenzhou International Optical Fair
2020 Gunyana Wenzhou International Optical Fair
18th Wenzhou International Optical Fair (WOF 2020) ichaitirwa muWenzhou International Convention uye Exhibition Center kubva munaGunyana 18 kusvika Nyamavhuvhu 20, 2020!
Chiyero chechiratidziro ichi chinosvika 30,200 mativi emamita ekuratidzira nzvimbo, nemakambani anopfuura 410 kubva kuGuangzhou neShenzhen kuGuangdong, Xiamen muFujian, Danyang muJiangsu, Xinhe muHebei, Yujiang muJiangxi, Rongchang muChongqing, Cangxi muSichuan, Linhai uye Yuhuan muZhejiang, uye Ouhai muWenzhou. Nyika magirazi maindasitiri masumbu senge Ruian neRuian vakaungana pamwechete, uye mabhizinesi kubva kuShanghai, Shaanxi, Ningbo, Zhejiang, Foshan, Guangdong nedzimwe nzvimbo dzakabatana rutsigiro.
Zviratidzo zvinosanganisira mafuremu emaziso, magirazi ezuva, magirazi emitambo, magirazi evana, magirazi ekuverenga, malenzi uye zvisipo, magirazi ekuputira, mbishi uye zvekubatsira uye zvekushandisa, maturusi akakosha, michina yekugadzira, michina yeOptometry nemidziyo, malenzi ekubata uye zvigadzirwa zvekuchengetedza. uye zvinhu, nezvimwewo. Nzvimbo yekuratidzira yakagadzirawo nzvimbo yekuratidzira yevaChinese uye vekunze vanogadzira maziso, inzvimbo yekuratidzira yemagogorosi nemagirazi ekudzivirira, girazi renzvimbo, uye nzvimbo yevateereri yekugadzira bhizinesi rehunyanzvi uye ruzivo rwekuchinjana ruzivo yeindasitiri yemaziso.
Mushure memakore emvura inonaya, Wenzhou International Optical Fair yakaunganidza yakawanda yevatengi data yemutengi, data rekuchengetera chitoro, dhata renyika rezvebhizinesi, uye vakaunganidza data hombe revatengi muiyo indasitiri yenyika. Wenzhou International Optical Fair inoshandisa mafoni, mameseji, maemail, uye kushambadzira kwekunze. , Kushambadzira pamhepo, kusimudzira midhiya uye dzimwe nzira dzekusvikira vatengi uye nekupa varatidziri vane rakaringana bhizinesi rinoenderana
Vagadziri vepakutanga uye zvigadzirwa kubva kuItari, Germany, Canada, nezvimwewo vakapinda mazviri. Mushure mekuongororwa kwakaomarara, akanakisa epakutanga zvigadzirwa zvakagadzirwa zvinoenderana nemamiriro ekuratidzwa kwenzvimbo zvakasarudzwa kuti vagadzire mutambo wepasirese wedanho.